भोलि हरिशयनी एकादशी, यस्तो छ महत्त्व
काठमाडौं – भोलि शुक्रवार हरिशयनी एकादशी परेको छ । यो पर्व नेपाल र भारत लगायतका देशमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गरेका छन् ।
यसलाई हरिशयनी, देवशयनी, विष्णुशयनी, पद्मा एवं शयन एकादशीको नामले पनि चिनिन्छ । यस एकादशीको व्रत प्रभावका कारण लोकमा भोग र परलोकमा मुक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । व्रत गर्न नसकेपनि व्रतकथालाई अवश्य पढ्ने र सुन्नुपर्ने धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ ।
पुराणहरूका अनुसार, यस दिनबाट भगवान् विष्णु चार महिनाका लागि पाताललोकमा बलिको द्वारमा बस्ने गर्नुहुन्छ र कार्तिक शुक्ल एकादशीमा फर्कनुहुन्छ ।
अन्य पौराणिक कथामा यस दिनबाट भगवान् विष्णु चार महिना सागरमा शयन गर्ने भएका कारण यस एकादशीलाई हरिशयनी एकदशी भनिन्छ । धर्मशास्त्रका अनुसार, यो चार महिना भगवान् विष्णु निद्रामा हुने भएका कारण यस समयमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न वर्जित गरिएको छ ।
यसबेलामा विवाह लगायतका काम गर्न नहुने धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ ।
ब्रह्मवैवर्त पुराणका अनुसार, हरिशयनी एकादशीको निकै ठूलो महत्त्व छ । यस एकादशीमा व्रत बस्नाले सबै मनोकामना पूरा हुने अनि सबै पाप नष्ट भई भगवान् हृषीकेश प्रसन्नु हुनुहुनेछ ।
यो महान् पुण्यमयी, स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्ने तथा समस्त पाप हर्ने व्रत हो । हरिशयनी एकादशीको दिनदेखि शुरू हुने चतुर्मासमा प्रतिदिन पुरुषसूक्तको जपको पनि महात्म्य छ ।
चतुर्मास भगवान् विष्णुको निद्राकाल हुनाले विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेश लगायतका मांगलिक कार्यमा विराम लाग्छ । यस अवधिमा साधुसन्तहरू एक स्थानमा बसेर विशेष साधना गर्छन् ।
भगवान् विष्णुको शयनका विषयमा अनेकौं कथा प्रचलित छन् । भविष्यपुराणमा उल्लेख भएअनुसार, एकपटक युधिष्ठिरले भगवान् श्रीकृष्णलाई सोधे, ‘प्रभो, देवशयन के हो ? देवता नै सुतेपछि संसार कसरी चल्छ ? देव किन सुत्नुहुन्छ ?’
श्रीकृष्णले उत्तर दिनुभयो, ‘राजन्, कुनैबेला योगनिद्राले भगवानलाई आफ्नो अंगमा स्थान दिन प्रार्थना गरिन् । त्यसपछि भगवानले योगनिद्रालाई नेत्रमा स्थान दिँदै चार महिना यहीँ बस्नू भन्नुभयो । त्यसपछि योगनिद्राले मेरो नेत्रमा वास गरिन् ।’
श्रीमद्भागवत महापुराणका अनुसार, श्रीविष्णुले एकादशीको दिन आततायी शंखासुरको वध गरेपछि परिश्रमबाट थाकेर क्षीरसागरमा शयन गर्नुभएको थियो । त्यसैले यस तिथिलाई देवशयनी एकादशी भनियो ।